Uphi i-eMule egcina iikhredithi? | Iindaba zeGajethi
Uphi i-eMule egcina iikhredithi?
Nokanye ukuba uyazi ukuba inkqubo yokutshintshiselana nge-eMule isebenza ngenkqubo yekhredithi efumaneka ngokwabelana ngeefayile esizigcinileyo kwikhompyuter yethu. Ngale ndlela, iifayile esabelana ngazo kunye nedatha egqithisiweyo esuka kwikhompyuter yethu, kokukhona siya kufumana iikhredithi.
PKodwa unokuzibuza, zithini iikhredithi ze- eMule serverEwe impendulo ilula kakhulu kodwa inkcazo ayisiyiyo kangako.
Impendulo: Amakhredithi amaninzi onawo, ngokukhawuleza uya kunyusa umgca wokukhuphela, kodwa uya kunyusa kuphela umgca womntu oqale ukukhuphela iifayile kwikhompyuter yakho.
Ingcaciso: Ukuba ukhuphela into nge-eMule uyazi ukuba ezi fayile azigcinwanga kwindawo ethile engaqondakaliyo kodwa kwiikhompyuter zabanye abantu abathanda ukuba babelana ngeefayile zabo. Ukuqala kweli nqanaba, masibone oku kulandelayo:
1) Masithi ikhompyuter yakho ngu-A, kwaye ukhuphela ifayile kwiikhompyuter B, C, kunye no-D.
2) Emva koko, ikhompyuter B ikhuphela ifayile kwikhompyuter yakho A kunye nekhompyuter D yokukhuphela ifayile kwikhompyuter B.
3) Ngale ndlela sinokuthi ikhompyuter yakho ikhuphela kwiikhompyuter ezintathu (B, C kunye no-D) kwaye ulayishe idatha kuye kuphela (B).
4) Njengonxibelelwano lwe-Intanethi lubekelwe umda kumda wendlela, asinakho ukuvumela wonke umntu ukuba akhuphele ifayile kwikhompyuter yethu ngokuthe ngqo kuba siza kuphelelwa ngumda wokuhamba. Ke ngoko, into eyenziwa nguMule kukudala umgca apho iikhompyuter ezahlukeneyo kuya kufuneka zilinde ithuba labo lokukhuphela. Olu luhlu luluhlu lokulinda kwaye yinto ebangela ukuba ngamanye amaxesha sibe neentsuku ezininzi ngaphandle kokukhuphela ifayile kuba iikhompyuter ezinayo loo fayile zisibeka esiphelweni kuluhlu lokulinda.
5) Kulapho iikhredithi singene kuzo. Makhe sijonge lo mfanekiso mtsha apho ikhompyutha C ingabonakali.
Masithi zontathu iikhompyuter zilayishe zaza zakhuphela idatha efanayo. Ikhompyuter A iyenyuka iifayile kwikhompyuter B ke ikhompyuter A phumelela iikhredithi zokwabelana. Ikhompyuter B kunye no-D Nyuka iifayile kwikhompyuter A ke iikhompyuter B kunye no-D nazo phumelela iikhredithi zokwabelana. Iikhompyuter ezintathu Baphumelele iikhredithi kuba iikhompyuter ezintathu Bavukile idatha. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba iikhredithi zifunyenwe bahlupheke iifayile kwaye hayi ngokuzikhuphela.
6) Ukuba ikhompyuter A, B, kunye no-C bazuze iikhredithi ezifanayo, kuya kuba sengqiqweni ukucinga ukuba xa kumgceni wekhompyuter B, iikhompyuter A kunye no-C ziya kuba nokukhetha okufanayo. Kodwa ukuba sijonga lo mfanekiso ulandelayo awunjalo.
Kwenzekentoni? Ukuba zonke iikhompyuter zineekhredithi ezifanayo, kutheni ikhompyuter A ingaphambi kwekhompyuter D kulayini wokukhuphela?
7) Nantsi into. Ikhompyuter A iphambi ko-D kuba ikhompyuter B ikhuphele iifayile kwiikhompyuter A kodwa hayi ku-D. Oko kukuthi, iikhompyuter A kunye no-B babelane. Iikhompyuter ze-B kunye ne-D azabelananga, kule meko ikhompyuter B ilayishe iifayile kwaye u-D uzikhuphile kodwa azabelani ngeefayile phakathi kwazo.
DApha kulandela ukuba iikhredithi kwi-eMule azikho kwihlabathi liphela. Oku kuthetha ukuba unokuba neekhredithi ezininzi ekunikwe ikhompyuter B kodwa azizukusetyenziselwa ikhompyuter D ukukubeka kulayini ngaphambili
BEwe unokucinga ukuba awudingi ukuyazi yonke le nto ukuze usebenzise iMule kwaye ulungile. Ke yintoni yonke le nto?
TKonke oku kuyanceda ukuba ucace malunga nezinto ezimbini.
Okokuqala: Ukuba awabelani ngedatha, akukho mntu unokukhuphela nantoni na kwikhompyuter yakho kwaye ke akukho mntu uya kukunika iikhredithi. Isiphelo: uya kusoloko ungowokugqibela kwimigca yokukhuphela.
Sibini: Ukuba ufomatha ikhompyuter, nokuba ungaphinda ufake yonke into, kubandakanya iMule, xa uzama ukukhuphela into, akukho mntu uya kukuqonda njengomnini weekhredithi owawunazo ngaphambi kokufomatha. Ayinamsebenzi ukuba wabelane kakhulu okanye kancinci, emva kokufomatha ngokungathi awabelananga nantoni na. Isiphelo: emva kwefomathi uya kuhlala ungowokugqibela emgceni.
DKe nokuba wabelana kakhulu ukuba ufomatha ikhompyuter uya kuphelelwa ngamakhredithi. Okanye mhlawumbi akunjalo?
SUkuba uyaqaphela asikaphenduli kwisihloko seli nqaku "Uzigcina phi iikhredithi ze-eMule?". Ukuba besisazi apho inkqubo igcina khona iikhredithi esiziqokelelayo, ngekhe siphume nazo emva kwefomathi. Izandi zinomdla?
Ngoku ungagqiba ukufunda eli nqaku ngo Uphi i-eMule egcina iikhredithi? (Inxalenye yesi-2)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uphi i-eMule egcina iikhredithi?
yenzayo 15 iminyaka
Sawubona iviniga, inomdla kakhulu kule ikwi-emule credits, uza kuzigqiba nini iindaba?
Uxolo, Makor, kodwa ndiye ndahamba kade kunokuba bendicinga. Ngomso okanye kutshanje iya kuba yinxalenye yesibini yenqaku. Xa ndiyigqibile, jonga ungandixelela ukuba ucinga ntoni ekugqibeleni. Umbuliso.
kulungile iviniga ndiza kujonga xa ugqiba iposti
Sele ndifundile ukuphela kwenqaku, intle kakhulu. Masibone ukuba uqhubeka uchaza izinto malunga ne-emule, indlela yokukhuphela ngokukhawuleza kunye nezinto.
Molo iviniga ndiyithande loo ngcaciso !!! kwaye ngokuyinxalenye ususa iingxaki ezininzi kum, hayi ngenxa yam kodwa ngenxa yokuba ku-kasa bakholelwa ukuba ndingu-infoirmatica kwaye bandibuza ngayo yonke into kwaye oku ibikukungathandabuzeki kwabo ukuze kungabikho nto ... ndiza kugqitha iphepha Bona kwaye bathambisa yonke into !!
Kakhulu Uqhwithela Ke ngebhlog uyandithanda othi xa umhlobo endibuza ndimthumele kwiphepha ukuze afumane isisombululo. Uza kubona ixesha oligcinayo. Ukubulisa.
Masidlale ialaplaya. Unxweme? Akukho alaplaya
Iinkqubo zokuhlala. Ziyintoni, ziyintoni kwaye zingakhubaza njani iinkqubo zememori yokuhlala.